Samsung Exynos 9820: ofisialy ny processeur an'ny Galaxy S10 | Androidsis
Exynos 9820: ny processeur an'ny Samsung Galaxy S10
Tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo, nanambara ny fanolorana ny processeur vaovao i Samsung, araka ny efa nolazainay taminao. Nampandrenesina ny fahatongavan'ilay mpikirakira azy vaovao avo lenta, izay handeha amin'ny Galaxy S10 izay ho tonga amin'ny fiandohan'ny taona manaraka. Ary farany, efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny mpanodina. Ny Exynos 9820 dia efa misy, ary manana ny antsipiriany rehetra momba izany izahay. Mpikirakira vaovao mampiseho ny fandrosoan'ny orinasa koreana.
Ny Galaxy S10 dia efa iray amin'ireo mpihetsiketsika lehibe tato anatin'ny herinandro, nomena ny goavana isan'ny tafaporitsaka sy honohono momba. Ankehitriny, fotoana tokony hifantohana amin'ity Exynos 9820 ity, izay hiandraikitra ny fanaovana io Samsung avo lenta io. Inona no azontsika antenaina amin'ny processeur?
Ity chip vaovao misy ny marika Koreana ity dia mahatratra ny avo indrindra amin'ny tsena. Mpikirakira matanjaka, ary mihatsara amin'ny teo alohany, ny 9810 natolotra tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Amin'ny maha-processeur avo lenta azy, ny mampiavaka azy dia an'ny sehatry ny tsena. Lazainay anao bebe kokoa etsy ambany.
1 Exynos 9820: mpanamboatra vaovao namboarina tamin'ny 8 nm
2 Famokarana sy fanombohana
Exynos 9820: mpanamboatra vaovao namboarina tamin'ny 8 nm
Ny zava-baovao voalohany sy lehibe izay tonga eto amin'ity Exynos 9820 ity dia i Samsung farany mampahafantatra singa iray natokana ho an'ny fanodinana neural. Amin'izany fomba izany, ny asa rehetra ampiasana ny faharanitan-tsaina dia tsy maintsy hosarahina amin'ny famonoana lehibe. Midika izany fa fitsitsiana angovo miavaka ho an'ny telefaona, ankoatry ny fanomezana fandidiana milamina kokoa ho an'ireo mpampiasa.
Ny cores processeur dia mizara ho clusters telo, izay manampy amin'ny fampiasana tsara kokoa ny dingana fanodinana izay ananan'ny finday ao anaty telefaona. Averina indray, fanapahan-kevitra izay manampy amin'ny fiasa tsara kokoa ao aminy. Ho fanampin'izany, ity Exynos 9820 ity dia novokarina tamin'ny dingan'ny famokarana vaovao amin'ny 8nm.
Ireto no toetra mampiavaka an'ity fanodinana ity:
Fomba fanamboarana ao amin'ny 8 nm LPP FinFET
Unité centrale: Cores manokana 2 + 2 x Cortex-A75 + 4x Cortex-A55
fitehirizana: UFS 3.0 sy UFS 2.1
Ny Neural Processing Unit (NPU) dia natsangana tamin'ny taniny
Modem: LTE-A Cat.20 8CA (amin'ny fampidinana 2Gbps), Cat.20 3CA (amin'ny 316cMbps fampidinana)
efijery: WQUXGA (3840 × 2400 teboka), 4K UHD (4096 × 2160 teboka)
fakan-tsary: 22 MP aoriana, 22 MP eo aloha, avo roa heny 16 +16 MP
Horonantsary fandraisam-peo: 8K amin'ny 30fps sy 4K amin'ny 50fps
Ao amin'ity Exynos 9820 ity dia ahitantsika fanatsarana ny fahombiazana, ankoatry ny fanjifana herinaratra. Samsung dia manambara ny fihenan'ny fanjifana angovo fanodinana. Ity dia fihenan'ny 10% mihoatra ny teo alohany, ny 9810. Ny fizotry ny famokarana dia manampy amin'ny fihenan'ny fanjifana, ankoatry ny fisian'ireo clusters telo voalaza etsy ambony.
Raha fintinina dia hitantsika ny fanatsarana mazava ao amin'ny processeur. Toa izany mitana andraikitra lehibe ny faharanitan-tsaina artifisialy ao amin'ny processeur, araka ny efa hitantsika tamin'ny fanambarana ny fampisehoana azy. Zavatra izay tsy isalasalana fa mandray anjara amin'ny processeur manome fahafaha-manao betsaka ho an'ireo mpampiasa. Ny fitaoman'ny faharanitan-tsaina artifisialy amin'ny fakantsary Galaxy S10 dia tokony homarihina ihany koa, mety misy maodely maivana ho an'ny mpampiasa. Na dia zavatra iray aza izany dia hamafisina amin'ny fampisehoana telefaona amin'ny fiandohan'ny taona manaraka.
Famokarana sy fanombohana
Ny telefaona voalohany hampiasa an'ity Exynos 9820 ity dia ny Samsung Galaxy S10, izay azo inoana fa haseho amin'ny MWC 2019 amin'ny faran'ny volana feb. Azo inoana fa ny Galaxy Note 10 izay tonga amin'ny tapany faharoa amin'ny taona ho avy dia hampiasa ity mpikirakira ity ihany koa.
Mikasika ny famokarana azy, Samsung dia hanomboka famokarana betsaka amin'ity processeur ity alohan'ny faran'ny taona. Ka ny Exynos 9820 dia ho vonona amin'ny Galaxy S10 amin'ny taona voalohany. Na dia tsy manana daty manokana momba ny famokarana aza izahay dia angamba ny marika Koreana no hanambara izany amin'ny fotoana hanombohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Exynos 9820: ny processeur an'ny Samsung Galaxy S10
Ahoana ny fampiasana pinning amin'ny efijery amin'ny Android
Ahoana ny fomba hahitana ny lalao eo noho eo tsara indrindra ho an'ny Android